सुन्दर र व्यवस्थित काठमाडौँ सहर बनाउने प्रष्ट भिजनसहित मैले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी हुँः सुनिता डंगोल, पूर्व मिस नेवाःएवं सांस्कृतिक अभियन्ता – Maitri News
सुन्दर र व्यवस्थित काठमाडौँ सहर बनाउने प्रष्ट भिजनसहित मैले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी हुँः सुनिता डंगोल, पूर्व मिस नेवाःएवं सांस्कृतिक अभियन्ता
maitrinews April 5, 2022
सन् २०११ मा मिस नेवाः बनेर चर्चा कमाएकी सुनिता डंगोल पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने रन्जना लिपिलाई नविन सोचका साथ विश्वभरका नेपालीलाई सिकाउँदै आएकी छिन् । ‘सोसियल साईन्स’मा स्नातकोत्तर गरेकी सुनिताले यहि बैशाख ३१ मा हुने स्थानीयतहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयर पदको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि उहाँको चर्चा थप चुलिएको छ । डंगोलसँग यही विषयमा केन्द्रित भई गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
मेयरको उम्मेद्वार बन्ने घोषणसँगै अहिले तपाईँको चर्चा चुलिएको छ । तपाईँ आफैँले चाँहि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
मैले निकै सोँच–विचार गरेर नै यो निर्णय लिएको हो । त्यसैले म आफैँले यसलाई सहज रुपमै लिएको छु । जहाँसम्म प्रतिक्रियाको कुरा छ । मैले मेयर पदको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु । नूतन सोँच भएका युवा अहिलेको आवश्यकता हो भन्दै मलाई धेरैले सामाजिक सञ्जाल र स्वमं मेरो भेटमा पनि उर्जा भरिदिने काम गर्नुभएको छ । त्यसले मलाई थप उत्साह भरिदिएको छ । धेरैले अब काठमाडौँ महानगर कस्तो बनाउने भन्ने योजना समेत मसँग सेयर गर्न थाल्नु भएको छ । म अहिले सबैका सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्दै मेरो चुनावी घोषणापत्रमा समेत समावेश गर्ने तयारीमा छु । मैले सफा र समृद्ध सहर बनाउन के–कस्ता योजना आवश्यक छ रु भनेर सार्वजनिक रुपमा समेत अपिल गरेको छु । सार्वजनिक अपिलमार्फत प्राप्त सकारात्मक सुझावलाई म मेरो घोषणापत्रमा समावेश गर्ने छु ।
यो एकदमै नयाँ प्रयोग तपाईँले गर्नुभएको छ । चुनावी घोषणपत्रमा समावेश गर्नका लागि सुझाव भनेर अपिल नै सार्वजनिक गरेपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
यहि आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयरको उम्मेदवार घोषणा गरेपछि मैले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने एजेण्डामा सुझावका लागि अपिल गरेकी छु । यहि बैशाख ३० मा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ निर्वाचन हुँदैछ । मैले सार्वजनिक गरेको अपिलमा मेयर पदमा निर्वाचित भै काठमाडौँलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउने आफ्नो सपनालाई मूर्त रुप प्रदान गर्न युवाहरुको भरपर्दो साथ, सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गेको छु । काठमाडौँ म जस्ता लाखौँ युवाको भाग्य र भविश्य निर्माण गर्ने सहर हो । म यहि सहरमा जन्मिए, म यहिँको माटोमा हुर्किए र धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि यहिँको माटो र परिवेशबाट प्राप्त गरेँ । त्यसैले मैले यहि माटोमा मेरो ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम् उपयोग गर्दै यो सहरलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपनासहित काठमाडौँको मेयर पदको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुँ । अहिलेको यो सूचना–प्रविधिको युगमा त्यसको उच्चतम उपयोग गर्दै मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने युवाकै आवश्यकता छ । समृद्ध र सुन्दर काठमाडौँ महानगर बनाउन युवाहरुको भिजन अहिलेको आवश्यकता भएकाले मैले मेयर पदको उम्मेदवार बन्दै गर्दा आफू भन्दा अग्रजहरुको विज्ञता, अनुभवीहरुको ज्ञान, सल्लाह, युवाको नूतन सोँच र सवै जनताको सद्भावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नु पर्नेहुन्छ । सार्वजनिक अपिलले त्यसमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।
युवाहरुका नूतन सोँच र योजनालाई समावेश नगर्ने हो भने मेरो चुनावी घोषणापत्र अधुरो बन्छ । त्यसैले यो सहरको मात्रै होइन मुलुककै भाग्य र भविश्य निर्माण गर्ने युवाहरुलाई साँस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई थप समृद्ध बनाउने अठोटका लागि निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा नविनतम् सोँच समावेश गर्न युवाहरुका नूतन योजनाका लागि अपिलमार्फत आग्रह गरेको छु । अहिले सकारात्मक सुझाव मैले प्राप्त गरिरहेको छु ।
महानगरलाई थप समृद्ध सरहको पहिचान दिन तपाईँको उम्मेदवारी हो ?
मुलुक समृद्ध बनाउन नयाँ सोँच भएका युवा चाहिन्छ । त्यो सोँच र भिजन मसँग छ । अहिलेको यो सूचना–प्रविधिको युगमा त्यसको उच्चतम उपयोग गर्दै मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने युवाकै आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि यूवाहरु नै नेतृत्वमा आउन आवश्यक छ । यो मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने मुलुकको नेतृत्वको जिम्मा पनि भिजन भएका योग्य र जुझारु यूवालाई नै दिनुपर्दछ । मसँग सुन्दर र समृद्ध काठमाडौँ बनाउने भिजन छ । मैले विदेश भ्रमणका सिलसिलामा त्यहाँको विकास र समृद्धिलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी छु । म त्यो अनुभव यहाँ पनि लागु गर्न चाहन्छु । त्यो भिजनलाई पूरा गर्न हरेक यूवाको साथ लिएर अघि बढ्ने छु । अनुभवी र विज्ञहरुको टीम बनाएर काठमाडौँलाई पर्यटकीय र सांस्कृतिक सहरको रुपमा विकास गर्नेछु । काठमाडौँ महानगर भनेको मुलुकको राजधानी रहेको नगर हो । यहाँको पूर्वाधार विकाससँगै सुन्दर सहर मुलुकका लागि नमूना हो । त्यसैले यो नगरलाई मुलुककै नमूना सहरका रुपमा विकास गर्न पनि मेयर पदको उम्मेदवारी दिने सोँच बनाएकी हुँ ।
योजना के–के छन् ?
अहिले पनि म सुझावहरु मागिरहेकी छु । उत्साहजनक सुझाव प्राप्त भएका छन् । सबै भन्दा पहिलो भनेको म मेयर निर्वाचित एपछि फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने छु । फोहरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिबाट फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । मैले जापान, जर्मनीआदि देशहरुको भ्रमण गर्दा यो देखेकी छु । उक्त प्रविधि नेपालमा ल्याएर फोहरलाई रुपैयाँमा ढाल्न सकिन्छ ।
अहिले काठमाडौँवासीले फोहर घरबाट निकाले वापत प्रति घर चार सय रुपैंया मासिक बुझाउनु परेको यथार्थ हाम्रा सामू छ । हामीले उक्त प्रविधि प्रयोग गर्न सक्यौं भने महानगर आफैँले बिजुली उत्पादन गरेर सहर झिलिमिली बनाउन सकिन्छ भने महानगरवासीबाट फोहर उठाउँदा उल्टै पैसा दिनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
दोस्रो भनेको संस्कृति–सम्पदाको संरक्षण हो । काठमाडांै महानगरपालिकालाई संस्कृति र सम्पदाको सहर भनि चिनिन्छ । महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका मूर्त–अमूर्त संस्कृतिक सम्पदा, मौलिक भाषा, लिलि, कला तथा ऐतिहासिक संस्कृतिक सम्पदाहरुलाई नविन सोँच र रणनीतिबाट युवाहरु मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण सम्बर्धन र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।
यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन तथा ट्राफिक अनुशासन पालना गर्ने कार्यको कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट योजना म सँग छ । त्यो विषयमा मात्रै यहाँ उल्लेख गर्दा लामो हुन्छ । त्यो भिजन मसँग छ ।
चौथो, अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । नयाँ–नयाँ प्रविधि र सूचना प्रविधिको विकास भैरहेको छ । त्यसको सदुपयोग गर्दै युवाहरुलाई समग्र महानगरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय सन्तुलित विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमसहित दिगो विकास व्यवस्थित सहरीकरणको लागि आवश्यक योजना बनाई काम गर्ने योजना म सँग छ ।
पाँचौँ, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पुनरुत्थान र सन्तुलन गर्ने, काठमाडांै महानगर पर्यटन विकास र प्रवद्र्धन, विश्व सम्पदादेखि विश्वसम्पदासम्म पदमार्ग निर्माण गर्ने, रोजगारीे श्रृजना गर्ने प्रष्ट योजना पनि म सँग छ ।
छैटौँ, महानगरलाई हाईटेक, डिजिटलाईज्ड स्मार्ट शहरको रुपमा विकास गर्ने । जनतालाई वडा–वडामा अनावश्यक रुपमा धाउन लगाएर दुःख दिइरहनु पर्ने युगको अन्त्य गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि डिजिटल प्रविधिबाट अधिकांश सेवा घरमै बसेर यहाँका जनताले लिन सक्ने वातावरण बनाउने म सँग प्रष्ट योजना छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्न सकिन्छ ?
काठमाडौंका जनताले संधै न्यायको पक्षमा मतदान गरेको इतिहास छ । म यहिँको माटोमा जम्मिएकी, हुर्केकी ज्यापु जातीको नेवार समुदायको छोरी हुँ । मैले सांस्कृतिक अभियन्ताका रुपमा योगदान गरेकी छु । मैले धेरै मुलुकको भ्रमण गरेर त्यहाँको विकासको मोडेललाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी छु । मैले त्यहाँको विकासको अनुभवलाई यहाँको माटो सुहाँउदो विसका गर्ने योजना बनाएकी छु । सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ कस्तो हुनुपर्छ र यहाँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकार भएको व्यक्ति हुँ । यहाँका युवाहरुको सोँच, यहाँका युवाहरुको भावना र यहाँका युवाहरुको भिजनको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा हुँ । त्यति मात्रै होइन आफू भन्दा अग्रजहरुको विज्ञता, अनुभवीहरुको ज्ञान, सल्लाह र सवै जनताको सद्भावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नेछु । मलाई यो आर्शिवाद अवश्य प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले ठानेकी छु । यी मेरो प्रारम्भिक योजनाहरु हुन् । मेयरको तयारीसँगै वृहद योजनासहित अघि बढ्ने छु । मलाई विश्वास छ, मेरो योग्यता, क्षमता र जनताप्रति समर्पित हुंदै गर्दैै आइरहेको समाज सेवाले गर्दा पनि यसपाली काठमाडौंवासीले मलाई मेयरको रुपमा विजयी बनाउने छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तपाईँ युवा हुनुहुन्छ । विश्वका धेरै देशहरुमा युवाले उदाहरणीय काम गरेर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेका छन् । तपाईँ अहिले राजनीतिमा आउँदै गर्दा बढी प्रभावित कुन नेतासँग हुनुहुन्छ ?
मैले यस अघिका अन्तवार्ताहरुमा पनि भन्ने गरेको छु । म समाजवादमा विश्वास गर्छु । विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंहहरु अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न । तर, उहाँहरुको योगदान अहिले पनि हरेक जनताको मानसपटलमा ताजा छ । अहिलेका जिवित नेतामा सपना देखाउन सक्ने क्षमता भएको नेतामा नेकपा९एमाले०का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली लाग्छ ।
Previous Previous post: जसपा र लोसपाबीच चुनावी तालमेल नहुने
Next Next post: पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति